I-STARCRAWLER'S ARROW DE WILDE ITYHOLA ABATYALI NGOKULUNGISELELA UKUSHUKUNYISWA KWEZESONDO, IBHENDI ITHATHA UXANDUVA OLUPHELELEYO - IINDABA
I-Starcrawler's Arrow de Wilde Ityhola abaTyali ngokuLungiselela ukuShukunyiswa kwezeSondo, iBhendi ithatha uxanduva olupheleleyo
Qaphela: Eli nqaku linenkcazo yokubetha.
I-Arrow de Wilde, imvumi ephambili yeqela ledwala Starcrawler , Ize ngaphambili ngezityholo zokuziphatha gwenxa ngokwesondo ngokubhekisele kwi-Growlers. Kwi ingxelo ithunyelwe nge-Instagram izolo (nge-30 kaJulayi), u-de Wilde ubhale malunga nesigameko athe senzekile ngoJanuwari ngelixa Ibhendi yakhe yayikhenketho kunye nabakhulisi eOstreliya . Ngokwengxelo, abakwa-Growlers bahlawulela indoda eyindoda, owathi u-Wilde wamhlasela kwigumbi elingemva kweqonga. Uthe amaGolders ayemngqonge, afota eso sehlo, kwaye wahleka ngelixa esenza iinzame eziphindaphindiweyo zokuzisusa kule meko.
Emva kokufunda amanye amava amabi amantombazana ababenawo kwiminyaka eyadlulayo, bendifuna ukubhala oku ukwazisa abantu ukuba le ikaka isenzeka, wabhala uWilde. Ngelixa kungekho namnye kumalungu ebhendi ye-Growlers ahlasela mna ngqo, baqesha omnye umntu ukuze bonwabe. Umlingane wakhe we-Starcrawler u-Henri Cash uxelele uPitchfork ukuba uzibonele emva kweziganeko ezichazwe ngu-Wilde. Imvumi ephambili ye-Growlers kunye nomsunguli osebenza naye u-Brooks Nielsen uxolisile ngesi sehlo kwingxelo yanamhlanje.
U-de Wilde wabhala ukuba ekupheleni kokusebenza kweStarcrawler kumboniso eMelbourne, uphume eqongeni ngelixa iqela lakhe liqhubeka nokudlala. Ndingene kwigumbi lokunxiba kwaye ndangeniswa kwangoko esofeni, ubhala, esongeza ukuba wayengenalo nelinye ixesha lokuphefumla umoya wam (emanzi ngumbilo kunye negazi elingelolonyani), ngequbuliso kwavela umntu onxibe iyunifomu yonyango. igumbi. Waqhubeka:
ithuba lokuhlaziywa kwe-rapper surf
Kungekudala emva kokuba engenile egumbini, ukhulule iyunifomu yakhe kwaye umculo uqala ukudlala. Ndaye ndaqonda ke, yinto yokuhlutha eyindoda kwaye yaqala ukuhleka njengoko ngokunyanisekileyo yayihlekisa kum ekuqaleni.
U-Wilde wongeze ukuba abalingane bakhe bazama ukubuyela umva, kodwa iingcango zazitshixiwe (inkcukacha ayifumene kamva). I-stripper, izihlunu ezikhulu kunye nazo zonke, zandibamba, zandibeka esitulweni, zaqala ukundinika i-lapdance, ubhala. Uburharha buphela ngokukhawuleza xa bungazukuphela. Ndiyafunga iqhubeke phantse imizuzu elishumi. de Wilde wongeze:
Qho xa ndizama ukuphakama wayendityhalela ezantsi. Kwaqala ukuziva kuthoba isidima ngakumbi njengoko umaleko ngamnye wempahla uxobule umzimba wakhe, abaKhulisi baqhubeka nokuhleka kunye nokufota yonke loo nto. Kungekudala wehla ngesantya kwaye ndayazi apho ibheka khona.
Ndiye ndavala amehlo ndabeka izandla ebusweni ndisiva ukungabinanto kwe dick kunye neebhola ezirhabaxa ecofa isifuba nobuso ngoku eqhubeka nokundibamba. Ndaqala ukuba nexhala. Intliziyo yam ibibetha ngamandla. Andizange ndibone ukuzihluba oku kunje ngaphambili. Wonke umntu kwi-Growlers wayeme ngeenxa zonke kum, ehleka kwaye ethatha iividiyo ngalo lonke ixesha, akukho mntu wakha wangena. Nje ukuba kugqityiwe, ndabalekela kwigumbi lokuhlambela ukuze ndiziqokelele (aka ndilile) kwaye ndihlambe i-dick ebusweni bam. Wonke umntu ebesahleka kwaye ehlaziya iividiyo ukuze abone imbonakalo yobuso bam, ethetha ngendlela endothuke ngayo.
U-Arrow de Wilde uthe uxelelwe ukuba esi siganeko salungiswa ngu-Brooks Nielsen kwaye saxabisa ibhendi kumakhulu ambalwa eerandi, sisibiza njengehlaya elibiza kakhulu.
dj ubomi obuphakathi ezinzulwini zobusuku
Umdlali wegitare we-Starcrawler uHenri Cash ulingqinisile ibali likaWilde kwingxelo eya ePitchfork. Yonke into e-Arrow eyithethileyo kwingxelo yakhe iyinyani, ubhalile uCash. Besitshixelwe ngaphandle eqongeni kodwa, emva kokubetha emnyango, sikwazile ukungena kwigumbi kwaye sabona indoda ehamba ze imi ngakwitolo. I-Arrow yayikhathazekile kwaye yandixelela lonke ibali kanye emva kwegumbi lokuhlambela. Sonke sasothukile kwaye sothukile kwaye sasingazi ukuba senze ntoni.
Namhlanje, uBrooks Nielsen, ubhekise kwisiteyitimenti sikaArrow de Wilde kwaye wakhupha uxwebhu kwingxelo eposwe kuyo Iqela le-Instagram . Ndicela uxolo ngezenzo zam, nangawo nawaphi na amalungu ebhendi, athe akhathaza, akhubekisa, okanye onakalisa nawuphina umntu okanye enza ukuba nabani na azive ekhuselekile ngaphantsi kwe-100%, wabhala uNielsen Ndithatha uxanduva olupheleleyo kunye noxanduva lokuziphatha kwawo onke amalungu ebhendi ye-Growlers, eyadlulayo neyangoku. UNielsen ukwabhengeze ukuba umseki kunye nomdlali wesiginci uMat Taylor uthatha ikhefu lexeshana kwiqela kwaye uzakusebenzela ukuphakamisa 'ulwazi kunye nemali eninzi njengoko enakho' kwimibutho yenkxaso yabasetyhini.
Kwezi veki zidlulileyo, izityholo zokuziphatha gwenxa ngokwesondo ziye zahlawuliswa iileyibhile zegaraji zaseCalifornia amagcisa nabasebenzi beBurger Records. Ileyibhile isongwe ngokupheleleyo njengeemvumi kubandakanya uNobunny, Ixesha leXesha likaDavid Loca, kunye I-SWMRS ’uJoey Armstrong bakhuphe ingxelo ezithetha ngezityholo zokungaziphathi kakuhle.
Abakhulisi, abathi bakhupha iirekhodi kwiBurger, bajongane nezinye izityholo zokuziphatha gwenxa. Ibhendi ikhuphe ifayile ye- ingxelo kwi-Instagram ngoJulayi 21, ephika izityholo ezithile kunye nokubhengeza izicwangciso zokujonga abanye; Isiteyitimenti eso, esijongwe yiPitchfork, sele icinyiwe. Ngaloo mini, i-keyboard ye-Growlers u-Adam Wolcott Smith wachaza kwi-Instagram ukuba uya shiya iqela . Ngomso olandelayo, uSmith wabhala nge-Instagram, andimsulwa ekusetyenzisweni gwenxa, kwaye wamkelwa kwisiganeko sokuhlaselwa ngokwesondo. Zombini ezi ngxelo ze-Instagram, zijongwe yiPitchfork, nazo zisusiwe.
Ungayifunda Ingxelo ka-Arrow de Wilde kunye neempendulo ze-Instagram zeGolders ngokupheleleyo apha ngezantsi.
Tom misch yussef imihla
Ukuba wena okanye umntu omaziyo uye wachaphazeleka kukuhlaselwa ngokwesondo, siyakukhuthaza ukuba ufune inkxaso:
I-RAINN yeSizwe yokuXhatshazwa kwezeSondo
1 800 656 ITHEMBA (4673)
Umgca wokubhaliweyo kweCrisis
http://www.facebook.com/crisistextline (inkxaso yengxoxo)
I-SMS: Thumela apha APHA ku-741-741
Inqaku lomhleli: Eli nqaku lihlaziyiwe ngoLwesihlanu, nge-21 kaJulayi ngo-7: 20 pm.
Ixabiso lemargo Intombi yomfama ophakathi
indawo yokwakha ngokutsha ubuthathaka
Imagos entsha ye-albhamu 2016
abantwana babona iziporho zihamba
ukujikeleza ilanga kwakhona
nick cave yokuxhela iiblues